Ziziphi iimfuno zokucoca ezicoca
Isikhundla samanje: Ikhaya -> Imashishini yokuhlamba i-Industrial
Yintoni umxholo weshishini ococekileyo ococekileyo ngoku? Ukuba utyalo-mali luvula ivenkile, vula abacocekisi abomileyo ukuba bafune iziphi izixhobo? Kholelwa ukuba abaninzi abantu baya kuba nolwazi malunga nale nkalo yengxaki, makhe sihlangane kunye neengcali zoshishino ukuze sifunde ngale ngcaciso yenkcazelo.
Abacebisi abacocekileyo abaqeqeshiweyo, inkonzo yokuhlamba ayikwazi ukusilela. Imeko yeemeko zangoku, ukuhlamba iimpahla kunye nokucoca kwindlu yindawo yokucoca abacocileyo, kunye nokuphuculiswa kwezinto eziphathekayo, abantu banenkathalo malunga neemfuno zokunxiba kunye nokunyuka, ukucoca i-dryer iyayiphendula nexabiso elongezelelweyo iinkonzo, ezifana nokunakekelwa kweembadada, ukukhangela, njl.
Enyanisweni ininzi yoshishino lokucoceka elomileyo lixhomekeke kwimisebenzi yezixhobo, ngoko ke abahlobo bezoshishino zokucoca oomatshini abahlambulukileyo banokuxhamla.
Kodwa uvule abacocekisi abomileyo ukuba bafune iziphi izixhobo? Eyona nto iqhelekileyo isherhi esomileyo, isomisi, i-disinfection cabinet, i-ironing table, i-steam generator, i-ironing table, umatshini wokutshiza, njl; enye imashini yokupakisha, iingubo, ibhanti njl. Ngokujonga kweshishini elongeziweyo, ukutshiza izicathulo kumatshini kakhulu.
Indlela yokucoca iipropati zokucoca iindawo ezithe ngqo ngumenzi, kodwa isitya sokucoca esomileyo esilungileyo? Kakade ke iindawo ezinkulu zokucoca i-dryers-ENEJEAN zokuhlamba izixhobo zokusebenza. Ezi zixhobo zokucoceka ezinomileyo zihlala zikhululekile, kwaye iingxaki emva kokuthengiswa zilungile.
Inqaku lokugqibela: Hlanganisa nethemba lokucoceka...
Inqaku elilandelayo: Umatshini wokucoca oomileyo ka...